कति असफल ? Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 10:11:12
जापानी समय : 01:26:12
Tag: कति असफल ?
Posted on October 13, 2017 by Sandeep Bhattarai
व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तिम बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले २९ असोजलाई समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन तोकेकाले चालू संसद्को अन्तिम बैठक बस्न लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को आयु रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार चालू संसद्को कार्यकाल २८ असोज अर्थात् शनिबार सकिनेछ । २८ गते शनिबार परेकाले संसद् बैठक बस्दैन । सोहीअनुसार २७ गतेलाई नै संसद्को अन्तिम बैठक बनाउने गरी दलका नेता, सभामुख तथा संसद् सचिवालयबीच सहमति बनेको हो ।
३ असोज ०७२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान घोषणा गरे । त्यसवेला संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ थिए । पहिलो संविधानसभामा समेत संविधानसभा अध्यक्ष रहेका नेम्वाङ ५ फागुन ०७० बाट पुनः दोस्रो संविधानसभाको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएका थिए । संविधान घोषणापछि ११ कात्तिक ०७२ मा संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्ले एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्यो भने त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् १४ कात्तिकमा माओवादी केन्द्रका नेता नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसअघि नै २९ असोजमा माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती नेपालकै इतिहासमा पहिलो महिला सभामुखको रूपमा निर्वाचित भइन् । तत्कालीन राप्रपा नेपालका गंगाप्रसाद यादव उपसभामुखमा निर्वाचित भए ।
शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम बैठक, सबै सांसद भूपू हुँदै
Posted in पत्रपत्रिकाTagged कति असफल ?, संसद्को अन्तिम बैठक आज : संसद् कति सफल